Iziphumo zezeMali zeApple kwiKota yokuGqibela yeMali | Ndisuka mac
Njengoko kubhengeziwe, iApple ibhengeze iziphumo zezemali kwikota yesithathu yonyaka ka2017, ikota yezemali yenkampani, kwaye evala unyaka ka2017. Njengesiqhelo, iApple iphinde yaphula ezona zibikezelo zibalaseleyo zabahlalutyi, ithengisa iPhones ezizigidi ezingama-46,7, 1,2 yezigidi zeeyunithi ngaphezulu kwangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, apho ithengise iiyunithi ezizigidi ezingama-45,5 zazo zonke iimodeli ze-iPhone.
Gcina ukhumbula ukuba unyaka nonyaka, inani lezixhobo ze-iPhone kwintengiso zikhulu, kuba ithathe umkhwa we qhubeka nokuthengisa izixhobo esele zikwimakethi iminyaka emi-2 Kwaye namhlanje basebenza ngokugqibeleleyo, into esingenako ukuyithetha nge-smartphone ye-Android.
Ukuthengiswa kweMac kunyuke nge-10% xa kuthelekiswa nekota enye kulo nyaka uphelileyo, ukusuka kwiiyunithi ezingama-4,8 ezigidi zeMacs ezithengiswe kwikota yesithathu yowama-2016 ukuya kwezi-5,4 yezigidi zeeyunithi zeMac ezithengiswe kwikota yesithathu yalo nyaka. IPad, landela ukufumana inxenye yomhlaba ebilahlekile kule minyaka idlulileyo, ukusukela oko amanani ayo okuthengisa enyuke nge-11% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, ukusuka ekuthengiseni i-9,3 yezigidi zeekota kwikota yesithathu yowama-2016 ukuya kwi-10.3 yezigidi zeeyunithi ezithengiswe kwikota yesithathu yowama-2017.
Elinye icandelo elibalulekileyo leziphumo zenkxaso-mali yenkampani inxulumene nengeniso efunyenwe yinkampani, iingeniso ezonyuke nge-12% xa kuthelekiswa nelo xesha linye kunyaka ophelileyo. Kwikota yokugqibela yonyaka-mali ka-2017, I-Apple ifumene ingeniso ye-52,6 yezigidigidi zeedola Ngeli xesha linye kunyaka ophelileyo, ingeniso ifikelele kwi-46,9 yezigidi zeedola.
Iinkonzo zika-Apple ziphinde zanda, kodwa ngeli xesha ngokumangalisayo, nge ukwanda ngama-36% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Ngokubhekiselele kwintengiso yeApple Watch, kwakhona uApple akakhange axele ngale nto, ke kuya kufuneka siqhubeke nokuxhomekeka kumanani anikezelwa ngabahlalutyi kuqikelelo lwabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iziphumo zezemali ze-Apple kwikota yokugqibela yezemali
Khusela iMacBook Pro yakho ye-15 intshi kwinto enokwenzeka